Gaasta Cuntada lagu Karsado Waxaa la Kordhiyay Qiimihii lagu iibsan Jiray | Hargeysa World~Herald
Gaasta Cuntada lagu Karsado Waxaa la Kordhiyay Qiimihii lagu iibsan Jiray
UncategorizedGaasta Cuntada lagu Karsado Waxaa la Kordhiyay Qiimihii lagu iibsan Jiray
Gaasta cuntada lagu karsado waxaa la kordhiyay qiimihii lagu iibsan jiray. $16 ayaa la siin jiray maantana $20 ayaa la gaadhsiiyay.
Dad diidaya oo ka mudaharaadaya cadowtinimadaa noloshooda taabanaysa ma arag! Waxa aan la yaabannahay waxa ku dhacay dadkaygii gobta ahaa ee 1997-kii odhan jiray:
Doolar qaate dooni mayno
Dibiga naaxay dooni mayno.
Dadkeennii xumaanta way diidi jireen oo way ka dagaallami jireen dulmiga iyo tacadiga axmaqiinta. Haddase wax ku dhacay ma garanayo; ma ribbo ayaa la cunsiiyay, ma hilib doofaar baa loo qariyay, ma xaaraan baa jaanjaamisay, ma wax kale ayaa inna foorariyay. Dad aan waxba diidayn! Waxa haya anigu garanmaayo.
Adduunyada kale oo dhan waa laga dhiidhiyaa xumaanta, inagga maxaa khaldan?
Nolosheennii maalin ba meel baa la duminayaa. Wiil yar oo jaahil ah ayaa gooya qiimaha baloodhka aynnu iibsanayno, kirada guryaheenna waxaa ka jaban kirada adduunyada kale in badan oo ka mid ah.
Meeshan qofkii caqli leh ha ka tashado ama ha isaga guuro!!
Waxaa qoray:- Cabdiraxmaan Cismaan Jaamac